မတျ 15, 2020 – Healthy Life Journal
ခြေထောက် တံကောက်ကွေးနောက်မှာ ခဏခဏ ပြန်ဖြစ်နေတဲ့ ဘုကြီး . . .
ပါမောက္ခဦးနေ၀င်း (အရိုးခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး) မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ Q. ခြေထောက် တံကောက်ကွေးနောက်မှာ ဘုကြီးဖြစ်နေလို့ ဆရာဝန်သွားပြတော့ အရည်ကြည်တွေကို အပ်နဲ့စုပ်ထုတ်ပေးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မကြာခဏ ပြန်ဖြစ်နေတယ်။ ဘာလုပ်သင့်ပါသလဲ ဆရာ။ LaiLai(FB) A. ခြေထောက် တံကောက်ကွေးနောက်မှာ ဘုကြီး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။...
နုပျိုစေရန် ကြက်ဥ၊ ဘဲဥ စားပါ
ကြွက်သားယိုယွင်းပျက်စီးမှု လျော့ကျပြီး ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်ကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့ ကြက်ဥ၊ ဘဲဥက အသုံးဝင်ပါတယ်။ တစ်နေ့ကို ကြက်ဥ ဒါမှမဟုတ် ဘဲဥတစ်လုံးစားပေးတာက ကြွက်သားတွေရဲ့ ယိုယွင်းပျက်စီးမှုကို လျော့ကျစေပြီး နှလုံးရောဂါ၊ မျက်စိကွယ်ခြင်းနဲ့ အိုမင်းခြင်း စတဲ့ကျန်းမာရေး အန္တရာယ်တွေကို လျှော့ချပေးနိုင်တယ်လို့ အာဟာရနှင့် သိပ္ပံပညာဂျာနယ်အရ...
စူး(ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျဖို့အတွက် စားသင့်တဲ့အစားအသောက်တွေကို သုတေသီတွေက လေ့လာဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပေမယ့် တကယ်တမ်းမှာတော့ ထိထိရောက်ရောက် အသုံးဝင်တဲ့ အစားအသောက်ဆိုတာ ရှားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီအစားအစာတွေထဲမှာ ခရမ်းချဉ်သီးကတော့ မပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။ ခရမ်းချဉ်သီး စားပေးတာက ကိုယ်ခန္ဓာသွယ်လျဖို့အတွက် တကယ်ကို ထိရောက်အသုံးဝင်ပါတယ်လို့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ယုံကြည်ထားကြပါတယ်။...